Halyey WTN ah si uu u hogaamiyo Dalxiiska Barbados: Jens Thraenhart, maamulaha cusub ee BTMI
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Barbados News Breaking » Halyey WTN ah si uu u hogaamiyo Dalxiiska Barbados: Jens Thraenhart, maamulaha cusub ee BTMI
Barbados News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wtn
Barbados waa meel aad u gaar ah, reer Barbadana waa dad aad u gaar ah oo leh sheekooyin badan oo ay sheegaan. Sheekada ugu weyn ee sheekada ayaa maanta lagu dhawaaqay. Jens Thraenhart, oo mas'uul ka noqon doona Suuqgeynta Dalxiiska Barbados (BTMI) laga bilaabo 1da Nofembar, oo ku beegan waqtiga Suuqa Safarka Adduunka.
Afar toddobaad ka hor, Canadian/German Jens Thraenhart waxaa Shabakadda Dalxiiska Adduunka ka dhigtay Geesi Dalxiis.
Sannado badan, Mr. Thraenhart wuxuu ahaa Agaasimaha Dalxiiska Mekong ilaa toddobaadkii hore wuxuu saldhiggiisu ahaa Bangkok, Thailand.
Maanta, Jens Thraenhart waxaa loo magacaabay inuu hogaamiyo Dalxiiska Barbados
Hadda ninka loo yaqaan Mr. Mekong waa madaxa fulinta ee cusub ee Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI).
Laga soo bilaabo Bangkok ilaa Barbados, tani waxay u noqon doontaa hareeraha cusub Jens Thraenhart iyo qoyskiisa.
Isagu waa Jens Thraenhart, ruug -caddaa dalxiis 26 sano ah, oo “ka soo baxay musharraxa ugu sarreeya oo ka kooban 178 murashax oo ah xirfadlayaal aqoon leh oo ka kala yimid adduunka oo dhan” ayuu ururku ku sheegay sii deyntiisa.
Wuxuu leeyahay in ka badan 25 sano oo safar caalami ah, dalxiis, iyo waayo-aragnimo soo-dhaweyn leh oo ku baahsan jagooyinka hawlgallada, suuqgeynta, horumarinta ganacsiga, maareynta dakhliga, qorsheynta istiraatiijiyadeed, iyo ganacsiga elektiroonigga ah. Bilowgii xirfadiisa, Jens 'hal-abuurnimada ganacsigiisa ayaa aad loogu fiiqay isaga oo aasaasay isla markaana ka shaqaynayay shirkad cunto-qabasho oo guulaysatay, isagoo ka bilaabay shirkad Internet-ka safarka firaaqada ah oo fadhigeedu yahay New York, iyo inuu maareeyo xarun golf oo raaxo leh oo madaxbannaan oo ku taal Jarmalka.
Sanadkii 2014, Jens Thraenhart waxaa magacaabay wasaaradaha dalxiiska ee Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, iyo Shiinaha (Yunnan iyo Guanxi) si uu madax uga noqdo Xafiiska Iskuduwaha Dalxiiska Mekong (MTCO) oo ah Agaasimaha Fulinta. Sannadkii 2008dii, waxa uu iska kaashaday shirkadda Shiinaha ee Dragon Trail oo ku guulaysata abaal-marin-guud, waxana uu hoggaaminayey kooxo suuq-geyneed iyo istiraatijiyad Internet-ka Guddiga Dalxiiska Kanada iyo Fairmont Hotels & Resorts. Ilaa 1999, waxa uu ahaa maamulaha guud ee Istaraatiijiyada Chameleon.
Wax ku bartay Jaamacadda Cornell oo leh MBA-ay aqoonsan Masters of Management in Hospitality, iyo Bachelor of Science wadajir ah oo ka socda Jaamacadda Massachusetts, Amherst, iyo Xarunta Jaamacadda "Cesar Ritz" ee Brig, Switzerland, Mr. Thraenhart waxaa loo aqoonsaday mid ka mid ah Warshada safarka ee 100ka xiddig ee ugu sarreeya ee ay soo saartay Majaladda Travel Agent Magazine ee 2003, ayaa lagu taxay mid ka mid ah HSMAI 25ka Iibka aan Caadiga ahayn iyo Maskaxda Suuqgeynta ee Martigelinta iyo Socdaalka ee 2004 iyo 2005, waxaana loo magacaabay mid ka mid ah 20ka Maskax ee aan Caadiga ahayn ee Socdaalka Yurub. iyo Marti-gelintii 2014. Waa xubin ku xidhan UNWTO, Xubin Guddida PATA, iyo Guddoomiyihii hore ee PATA Shiinaha.
Mr. Thraenhart waxa uu leeyahay maskax caalami ah oo dhab ah.
Ballanta Barbados waxay dhaqan galaysaa 1-da Noofambar.
Jens waligiis kama shaqeynin Kariibiyaanka laakiin wuxuu hogaaminta caalamiga u keenayaa Barbados iyo inta badan gobolka Caribbean ee ku tiirsan dalxiiska.
Juergen Steinmetz, Guddoomiyaha Shabakada Dalxiiska Adduunka, wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee ugu hambalyeeyay Jens booskiisa isagoo leh: "Tani waa fursad aad u wanaagsan oo aan ahayn Jens oo keliya, laakiin Barbados iyo Kariibiyaanka. Waxaan aqaanay Jens sanado badan. Tani may ahayn doorasho ka wanaagsan.”
Jens waa xubin ka mid ah Shabakada Dalxiiska Adduunka oo kaliya 4 toddobaad ka hor ayaa helay Geesiyaasha Dalxiiska abaalmarinta ururkan caalamiga ah.
"Tani waxay maalin wanaagsan u tahay Barbados iyo Dunida Dalxiiska."
Dalxiiska Barbados wuxuu yidhi: "Ogaysiiskani wuxuu u horseedi doonaa waa cusub ururka, kaas oo arki doona u gudubka BTMI ee u gudubka ganacsi suuq geyn ganacsi oo badan kaas oo dib u habeynaya hawlihiisa si uu ugu tartamo waaga cusub ee masiibada ah ee dalxiiska adduunka."
Jen. ee IT iyo Travel & Dalxiiska (IFITT), keenaya xidhiidhada muhiimka ah ee daneeyayaasha suuqyada bartilmaameedka muhiimka ah ee dalxiiska Barbados.
Guddoomiyaha BTMI Roseanne Myers ayaa sheegtay in ururku uu horey u qabtay shaqo weyn oo dib u furista suuqyada iyo sameynta xiriiro ganacsi.
"Waxaan rumeysannahay in iyadoo ay weheliso waayo-aragnimada dalxiiska caalamiga ah ee Jens, rikoor la xaqiijiyay ee fulinta istiraatiijiyadda iyo fikradaha ganacsi, BTMI ay ka soo bixi doonto muddadan masiibada shirkad suuq geyn oo aad u xoog badan, wax qabad sare leh oo faa'iido korodha u keenta warshadeena iyo dhaqaalaha ballaaran, ”ayay tiri.
"Waxa aanu qaadnay caqabada ah in aanu helno musharaxa ugu wanaagsan jagada agaasimaha guud si uu gacan uga geysto qaabaynta dariiqa horay loogu soconayo, aad ayaan ugu faraxsanahay in aanu sidaas samaynay, ka dib habraac hufan oo hufan. Waxaan ku soo dhaweyneynaa Jens kooxda Barbados."
27 Barbadian ah iyo 178 ka socda Caribbean-ka ballaaran ayaa ka mid ahaa XNUMX codsade. Habka raadinta iyo xulashada waxaa fuliyay Profiles Caribbean Inc. iyo guddi-hoosaadyada guddiga iyo xirfadlayaasha warshadaha. Wakaaladu waxay sidoo kale samaysay wacyigelin firfircoon oo la xidhiidha shuraakada warshadaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee BTMI.